Nigeria: Sida bariis uu sabab ugu noqday in xudduudo la kala xirto - BBC News Somali
Nigeria: Sida bariis uu sabab ugu noqday in xudduudo la kala xirto
Nigeria, oo ka mid ah dalalka Afrika ugu awoodda badan, waxay xuduudeeda xirtay laba bilood ka hor si ay uga hortagto alaabta ganacsiga ee qarsoodiga lagu geliyo - Balse tallaabadaas waxay saameysay ganacsiga dalalka gobolkas oo dhan.
Isu socodka xuduudaha ayaa hakad ku jira, iyadoo cuntadii ay quruntay, gawaarida xamuulka qaadana ay safaf dhaadheer ku jiraan iyagoo sugaya in lafasaxo.
Xiritaanka xadka ayaa lagu dhawaaqay 21-kii August iyadoo digniin hore aysan jirin, dalalka deriska la ahna way ka careysan yihiin arrintaas.
Maxaa sababay tallaabadaas?
Arrintaas oo dhan waxaa sabab u ah bariis. Waxay u muuqataa in nigeria ay ka xanaaqsan tahay bariiska ku qulqulaya xuduudeheeda iyadoo horey loo mamnuucay.
Sida ay dadka Nigeria u jecel yihiin bariiska waa mid aan la qiyaasi karin gaar ahaan cunidda jollof.
Dadka badeecada qarsoodiga ah isu gudbiya ayaa bariis laga keenay dalka Benin geeya Nigeria, taas oo lagu tilmaamay dhaawacidda dhaqaalaha.
Meesha ugu badan ee kotorobaanka la isaga safriyo waa Cotonou, magaalada ugu weyn Benin iyo xarunta ganacsiga Nigeria ee Lagos, kuwaas oo dhor saacadood oo safar ah isu jira.
Sida laga soo xigtay Baanka Adduunka, dhaqaalaha Benin wuxuu si wayn ugu tiirsan yahay isu gudbinta badeecada aan sharciga ahayn, iyo ganacsiga sii mara Nigeria, taas oo u dhiganta 20% dakhliga dalkaas.
Qiyaastii 80% boqolkiiba alaabta soo gasha Benin waxaa loosii gudbiyaan waddanka Nigeria.
Nigeria waxay 2004-tii mamnuucday bariiska laga keeno Benin iyo dhammaan dalalka deriska la ah oo la joojiyay 2016-kii, balse taas ma uusan joojin ganacsiga noocaas ah.
Muxuu Bariiska u yahay mid lagu hardamayo?
Nigeria waxay aqbaleysaan keliya bariiska dekadaha ka soo gala - halkaas oo boqolkiiba 70% canshuur ah lagu saarayay tan iyo 2013-kii.
Tallaabada waxay kordhisay dakhliga canshuurta iyo in beeraleyda gudaha dalkaas ay ku dhiiradaan in ay bariis abuurtaan.
Balse dadka kotorobaanka kala gudbiya ayaa ka faa'ideystay in ay fududahay ayna raqiis tahay in bariis la geliyo Nigeria.
Sida laga soo xigtay Laanta maraakiibta iyo dekadaha Nigeria, sannadkii 2014-kii, Benin waxay yareysay canshuurta bariiska oo ahayd 15% boqolkiiba, haddana waxaa laga dhigay 7% boqolkiiba. Sidoo kale dalka Cameroon ayaa gebi ahaanba meesha ka saaray canshuurtii bariiska oo ahaan jirtay 10% boqolkiiba.
"Bariis caag ka sameysan" oo lagu qabtay Nigeria
Nigeria: Bariiska caag ma ahan ee wuu sumeysan yahay
Haweenay karsatay hilbaha ninkeeda
Dalka Benin ayaa ka dib ka faa'ideystay sare u kaca soo dejinta bariiska ka yimaadda Thailand oo ah waddanka labaad ee bariiska ugu badan soo saara Caalamka oo dhan.
Haddaba, waxaa muuqata in bariiskaas oo dhan uu ku dhammaado dalka Nigeria oo ah dal ay ku nool yihiin 200 milyan oo qof oo bariisku ku yaryahay. Waana mid aan la dafiri karin dadka Nigeria iyo sida ay u jecel yihiin bariiska.
Waxaa jiray xilli bariiska uu ahaa cuntada madaxda iyo taajiriinta Nigeria oo keli ah, kaas oo la cuni jiray Axaddii oo keli ah. Laakiin hadda waa mid qiimihiisu la goyn karo - sidoo kale dadka jecel bariiska Jollof ayaa ka dhigay Cuntada Qaranka.
"Bariis caag ka sameysan" oo lagu qabtay dalka Nigeria
Nigeria waxay la wareegtay 2.5tan oo "bariis caag ah" oo dalkaasi si qarsoodi ah lagu geliyay, waxaana laga keenay Shiinaha, sida saraakiisha dowladda dalkaasi ay sheegayaan.
22 Disembar 2016
Fannaanada reer Suudaan ee Naada iyo Soomaalida
Dal ciidankiisa militariga ay gaajaysanyihiin yabooh caalami ahna loo samaynayo
Qasrigii hawada meerayay ee Qadaafi oo dib loo soo celiyay
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: 29 Maarso 2021